"Antler" - ध्यान आवश्यक एक फूल
यस्तो बोट असामान्य, धेरै विदेशी उथला बिरुवाहरु बढ्न रुचि गर्ने unnoticed उत्पादक जाने सक्दैन, platycerium छ। यी साँचो "Antler"। यो फूल न्यानो क्षेत्रहरु आउँछ: मडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अष्ट्रेलिया, भारतीय महासागर द्वीप, र यो केही एशियाली देशहरूमा पाइन्छ। तपाईं बोट को बीचमा हेर्न भने, यो जरायोको सिड़ resembling, बन्दागोभी धेरै समान देखिन्छ, तर आफ्नो टावर भव्य पात को शीर्ष सक्छ।
सजावटी उथला बिरुवाहरु सामान्यतया विशेष हेरविचार र platycerium आवश्यक - कुनै अपवाद छ। यो फर्न को किसिमहरु को एक, केही अवस्था सामान्य वृद्धि लागि आवश्यक छ छ। को बोट धेरै प्रभावशाली देखिन्छ, तर यो राम्रो अवस्थामा राख्न यो कोठा उच्च आर्द्रता र हावा तापमान रहेको आवश्यक छ। एक बिरूवा भण्डारमा किन्न निर्णय छ, तपाईं कत्तिको picky "Antler" बुझ्न आवश्यक छ।
प्राकृतिक वातावरणमा फूल को जंगल मा रूखहरू मा बढ्दै छ। यो पनि अनिश्चय मा राख्न सबै भन्दा राम्रो छ अपार्टमेन्ट, अन्यथा पातहरू खिडकी मा झूठ, यो बिल्कुल आफ्नो उपस्थिति सुधार छैन। चालित बोट रूख छाल, क्षय हुनु, मश, मृत कीराहरू। निस्सन्देह, घरमा जस्तै अवस्था सिर्जना गर्न असम्भव छ वातावरण, तर अझै पनि सकेसम्म मिश्रण रूपमा नजिक टिप्न गर्न आवश्यक छ। यो सुनगाभाहरू लागि तयार बनाएको माटो किन्न सर्वश्रेष्ठ छ।
फूल "एन्टलर्स" बिग्रेको छाल र राख्दै मूल्य को पट मा राम्रो जल आवश्यक sphagnum मश। गर्मी बोट + 20-28 ° C मा राम्रो महसुस, तर न्यूनतम जाडो तापमान + छ 15-18 ° सी प्रत्यक्ष सूर्यका पात platycerium लागि हानिकारक छ, यो आंशिक छाया मा राख्न सबै भन्दा राम्रो छ। "Antler" जस्ता बोट लागि सिद्ध स्थान - पूर्व सामना Windows र पश्चिम, संग कोठा।
फूल नियमित पानी आवश्यक छ। यसको जरा सुक्खामा छैन बाहिर, तर उहाँले waterlogging छोड्न सक्दैनौं। पानी गाह्रो छ, त्यसैले एक समय पानी मा पट डुबाउनु लागि यो राम्रो छ। Platycerium उच्च रुचि चिस्यान, त्यसैले यो जलजीवालय नजिकै पूर्ण महसुस। यो पनि पात स्प्रे गर्नुपर्छ। को स्प्रेयर धेरै साना, छैन हुन सबै भन्दा ठूलो घटेको हुनुपर्छ। पानी एक नरम, न्यानो लिन र बसोबास गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि मामला मा यो यसको अवस्था प्रभावित, को villi बिगार्न सक्छ भएकोले बोट को पात हटाउन असम्भव छ!
खुवाउने - पनि "Antler" आवश्यक के छ। फूल खुवाउनुभयो वसन्त र गर्मी महिनामा एक पटक जैविक र खनिज मल। पत्तेदार बिरुवाहरु लागि अप्ट खुवाउने, तर औषधिको खुराक आधा द्वारा कम गर्नुपर्छ। को चिन्ता छैन लायक फेरि platycerium Sprawling, आवश्यक भएमा धेरै होसियार हुन शेयर वयस्क फूल। प्रचारित "Antler" spores पातहरुमा बढ्दै, तर एक स्वस्थ बोट धेरै गाह्रो छ प्राप्त गर्न। यो केवल अनुभवी माली बाट प्राप्त छ बनाउन आवास अवस्था। Platycerium कहिल्यै स्पष्ट कारण blooms - उहाँले फर्न छ - तर यो आँखा आफ्नो शानदार पत्ते प्रसन्न।
छोराछोरी चयन गर्न को लागि एक blooming फूल कोठा: को भित्री सजाउनु
कसरी र कहिले सङ्कलन नागफनी
मिमोसा star name pudica। खेती को सुविधाहरू
साइबेरिया मा तुलिप्स रोपेर कहिले बाहिर आंकडा गर्न प्रयास गर्ने?
"दराज" हटाइयो: समीक्षाहरू। गर्मीको निवासको लागि ग्रीनहाउज: विशेषताहरू, फाइदाहरू, स्थापना सुविधाहरू
मालिश कुर्सियों - एक मालिश मा Indulge गर्न सही तरिका
परेला विस्तार के गोंद चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ?
कुरा गर्न एक सुगा कसरी सिकाउन
एक अंतिम संस्कार: एक मेनु। जागिरको लागि तयार छ?
व्यायाम मा बच्चाहरु - बलियो र स्वस्थ बच्चाहरु